मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका र झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा नेकपा (एमाले) विजयी भएको छ।
निर्वाचन आयोगले नियमित पत्रकार सम्मेलन नगर्ने निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम जेठ ९ गतेदेखि नगर्ने भएको छ।
नेपालमा पनि देखियो ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ छिमेकी देश चीन र भारतमा रहेको ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ नेपालमा पनि देखा परेको छ।
भरतपुरमा इन्सुरेन्सको कार्यालयमा आगलागी, एक कर्मचारीको मृत्यु चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१० बालमन्दिर रोडस्थित शिखर इन्सुरेन्सको शाखा कार्यालयमा आगलागी भएको छ। त्यही क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन्।
पूर्व सहसचिव नागेन्द्र झा मेयरमा पराजित नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव नागेन्द्र झा सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका छन्।
अर्थशास्त्री वाग्लेको पुस्तक ‘अतृप्त अवसर’ सार्वजनिक अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पुस्तक ‘अतृप्त अवसर’ सार्वजनिक भएको छ।
धरानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित सुनिश्चित धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङको जित सुनिश्चित भएको छ।
काठमाडौंमा बालेनले कटाए ४० हजार मत काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन) को मत ४० हजार नाघेको छ।
देशभर ३३ हजार १५२ उम्मेदवार निर्वाचित, कसको कति मत? स्थानीय तहको निर्वाचनबाट अहिलेसम्म देशभर ३३ हजार १५२ उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
धनगढीको मेयरमा हमाल र उपमेयरमा राना विजयी सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल निर्वाचित भएका छन्। उनी १२ हजारभन्दा बढी मतान्तरले निर्वाचित भएका हुन्।
भरतपुरमा साढे ८९ हजार मतगणना हुँदा रेणु दाहाल ७ हजार ४१५ मतले अघि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहालले सात हजार ४१५ मतले अग्रता लिएकी छन्।
तिलोत्तमाको मेयरमा गठबन्धन र एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धनका उम्मेदवार रामकृष्ण खाँण ६३ मतले अगाडि छन्।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेल र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) की संगीताकुमारी चौधरी निर्वाचित भएका छन्।
चुनाव जितेर चर्चित चार युवा
पढाइ र कामकाज छोडेर गाउँ फर्किएका ३० वर्षमुनिका चार युवाले आगामी पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्।
दिलीपका हत्यारालाई कारबाहीको माग गरी काठमाडौंमा प्रदर्शन वातावरण संरक्षणमा सक्रिय धनुषाको मिथिलाका दिलीपकुमार महतोको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ।
धनगढीमा गोपाल हमालको जित सुनिश्चित धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालको जित सुनिश्चित भएको छ।
अन्तिम खेलमा नेपाल ३३ रनले विजयी टी-२० शृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालले युगान्डालाई ३३ रनले पराजित गरेको छ।
२३ पार्टीबाट ३२ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित, कुन पार्टीले कति जिते? (सूची सहित) ६६१ स्थानीय तहमा ३२ हजार ४७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
महिला हिंसा विरुद्ध पोखरामा पनि प्रदर्शन आठ वर्षअघि ब्यूटी पेजेन्टमा सहभागी युवतीमाथि आयोजकबाट भएको बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पोखरामा पनि प्रदर्शन गरिएको छ।
गृहले भन्यो- आठ वर्षअघिको बलात्कार घटनामा छानबिन शुरू भइसकेको छ आठ वर्षअघि ब्यूटी पेजेन्टमा सहभागी युवतीमाथि आयोजकले बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहार गरेको घटनामा छानबिन शुरू भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
भरतपुरमा ७६ हजार मत गन्दा रेणु पाँच हजारले अगाडि भरतपुर महानगरपालिकामा शनिबार अपराह्न साढे २ बजेसम्म ७६ हजार ९५ मतगणना भएको छ।
देशभर ३२ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित (सूची) स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभर ३२ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्।
लम्की चुहामा सुशीला र जुना निर्वाचित कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा सुशीला शाही र जुना चौधरी निर्वाचित भएका छन्।
हरेक निर्वाचनमा अर्को दललाई जिताउँछन् मतदाता छिल्लो तीन दशकमा नेपालमा ६ वटा आम निर्वाचन र चार वटा स्थानीय तह निर्वाचन भए। अधिकांश यी निर्वाचनको साझा विशेषता हो, ताजा जनमतले ठूलो दलको सट्टा विपक्षी दललाई रोज्ने गरेको देखाउँछ। मतदाताले हरेक निर्वाचनमा विकल्प हेरिरहेको देखिन्छ।